တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: December 2011
မနက်ဖြန်ဆို ဒီဇင်ဘာက ကုန်ဆုံးတော့မယ်။
နှစ်တနှစ်ကို အနားသတ်ပေးတဲ့ ဒီဇင်ဘာလဟာ ကျမအတွက်တော့ ခံစားချက်မျိုးစုံ ရောပြွမ်းလို့ပါပဲ။ ဟုတ်တယ် ... ဒီနှစ် ဒီဇင်ဘာမှာ စိတ်ဖိစီး ညစ်နွမ်းမှုတွေ ... လွမ်းဆွတ်သတိရခြင်းတွေ ... ကြည်နူးပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ တဒင်္ဂလွတ်လပ်ပေါ့ပါးခြင်းတွေ အားလုံး ကျမရင်ထဲမှာ ပေါင်းစုံနေခဲ့တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘ၀မှာ အမှတ်တရအဖြစ် ကျန်ခဲ့မယ့် ဒီဇင်ဘာလကလေးမို့ ဘလော့မှာ မှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါတယ်။ ၂၀၁၁ရဲ့ ဒီဇင်ဘာဒိုင်ယာရီ ဆိုပါတော့ ... ။
အေးစက်စက်မနက်ခင်းမှာ အထီးကျန်ခြင်းနဲ့ အိပ်ရာက နိုးထခဲ့တယ်။ တအိမ်လုံးမှာ တယောက်ထဲ ... ဦးရီးတော်က အလုပ် အားလပ်ရက် ခရီးသွားနေလို့ အိမ်မှာမရှိဘူး။ ထုံးစံအတိုင်း မနက်စာ ပေါင်မုန့်နှစ်ချပ်နဲ့ ကော်ဖီတခွက်ကို ကမန်းကတန်းစားသောက်ပြီး ကျောင်းသွားရတယ်။ ချိုသလား ခါးသလား အရသာ မခံဖြစ်တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်နေ့ ...။
(၁) ကျောင်းသွားဖို့ ဘတ်စ်ကားစောင့်တဲ့နေရာလေး၊ (၂) နေ့လည်စာကလည်း ပေါင်မုန့်နှစ်ချပ်နဲ့ ကော်ဖီပါပဲ ...။
ဦးရီးတော်ပြန်ရောက်မှာမို့ တမနက်ခင်းလုံး အိမ်ရှင်း ဟင်းချက်၊ စာမဖတ်ဖြစ်ဘူး၊ စာမေးပွဲက ဒီဇင်ဘာ ၈-ရက်။ စာတွေက ခေါင်းထဲမှာမရှိ ... ရာသီဥတုက အုံ့မှိုင်း လူက ထုံထိုင်း ... ။ ဦးရီးတော်ပါလာတဲ့ လက်ဆောင်တွေကိုလဲ ခါတိုင်းနှစ်တွေကလို ရင်မခုန်မိတော့ … ။
၅ - ၇ ဒီဇင်ဘာ
တစစ နီးကပ်လာတဲ့ စာမေးပွဲက လူကို သွေးပျက်စေတယ်။ စာဖတ်ရတာလဲ ငြီးငွေ့လှပြီ။ အဖေနဲ့ ဖုန်းပြောတိုင်း အားပေးစကား အမြဲပြောပေးနေလို့ အတော်အသင့် စိတ်သက်သာရာ ရခဲ့တယ်။
ယုံကြည် မနော ရှိပါစေ” ... တဲ့။
အဖေက သူရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကဗျာလေး ရွတ်ပြတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်ဖို့က အဓိက ... ကျမက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုတွေ ပျောက်နေတာ ကြာခဲ့ပြီ။
မျက်နှာကျက်က မီးရောင်မှိန်မှိန်လေးနဲ့ စာကြည့်ရလွန်းလို့မျက်လုံးပြူးပြီး လျှာထွက်နေပုံ :)
စာမေးပွဲ စဖြေရတယ်။ စာဖြေခန်းမထဲ မ၀င်ခင် အပြင်မှာထိုင်ရင်း အငြိမ်မနေနိုင်တဲ့လက်က ဖုန်းလေးနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ခဲ့သေးတယ်။ ဖြေနိုင်လား ... မဖြေနိုင်ဘူးလား၊ ကျေးဇူးပြုပြီး မမေးကြပါနဲ့။ ကိုယ်တိုင်လဲ ဇဝေဇ၀ါနဲ့ ဘာမှန်းမသိတဲ့ စာမေးပွဲတခုပါပဲ။ ဒီလိုနဲ့ .... …. ….
စာမေးပွဲ နောက်ဆုံးနေ့။ ခါတိုင်းနှစ်တွေလို စာမေးပွဲပြီးတာနဲ့ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ ခံစားမှုမျိုး မခံစားရဘူး။ စိတ်ထဲမှာ တမျိုးကြီးပဲ၊ စိတ်တွေ လေးနေတာလား ... လေနေတာလား ... မခွဲခြားတတ်ခဲ့ … ။ တရက်ကို ၃နာရီ ၁၅ မိနစ်နဲ့ ၃ရက်တိတိ စိတ်ပင်ပန်းခံခဲ့ရတဲ့ ဒီခန်းမကြီးကို ကျောမခိုင်းခင် အမှတ်တရ ပုံရိုက်ခဲ့တယ်။ လူတွေက ခန်းမကြီးကို စွန့်ခွါသွားကြချိန်မှာ သက်မဲ့ထိုင်ခုံလေးတွေသာ ငြိမ်သက်စွာ ကျန်ရစ်ရင်း ... ။
ဒီဇင်ဘာအလွမ်း ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကို ထပ်တလဲလဲ နားထောင်ရင်း လွမ်းနာကျနေခဲ့တယ်။ မိဘတွေနဲ့ တနိုင်ငံထဲမှာနေနေရပေမဲ့ တမြို့စီဝေးနေလို့။ “အမေတို့ရှိရင် သမီးစာကောင်းကောင်း ကြည့်လို့ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး” ဆိုပြီး ဦးရီးတော်အိမ်နဲ့ မိုင်တရာကျော်ဝေးတဲ့ ကျမအမအိမ်မှာ နေနေကြတယ်။ ၁၁ နှစ်ကျော် ကွဲကွာနေတဲ့ မောင်လေးကလဲ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့က ရောက်လာပေမဲ့ ကျမနဲ့မတွေ့ရသေးဘူး။ စာမေးပွဲပြီးပြီးချင်း မိဘ မောင်နှမတွေ ရှိရာကို အပြေးသွားလိုက်ချင်တယ်။ သို့သော်လဲ ကံကြမ္မာက ကိုယ့်ဘက်မှာ မရှိပြန်ဘူး။
တနေ့လုံး မီးဖိုထဲမှာ ချက်ပြုတ်ရင်း အချိန်ကုန်ခဲ့တယ်၊ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခွင့်မရှိတဲ့ မိသားစုစုံညီ ဆွမ်းကျွေးပွဲအတွက် ဟင်းအမယ် အမျိုးမျိုးကို တယောက်ထဲ တိတ်တဆိတ်ချက်ရင်း ကျမ ကြေကွဲနေမိတယ်။ နက်ဖြန်ဆိုရင် ကျမအမအိမ်မှာ ဆွမ်းကျွေးလုပ်ကြမယ်။ ကျမကတော့ အလုပ်သွားရမယ်။ စာမေးပွဲကာလမှာ အလုပ်ကခွင့်ယူထားတာ ကြာပြီမို့ သူတို့ပြောတဲ့နေ့မှာ ပြန်ဆင်းပေးရမယ်၊ ကျမ ငြင်းလဲမငြင်းချင်၊ ငြင်းလဲမငြင်းသင့်ဘူး မဟုတ်လား။
ဆွမ်းကျွေးအတွက် တတပ်တအား ကုသိုလ်ပါဝင်ချင်လို့ တယောက်ထဲ ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ ဟင်းလျာများ (ဦးရီးတော်နဲ့ လူကြုံထည့်ပေးလိုက်တာပါ)
မနက်စောစော အလုပ်သွားချိန် အမှောင်ထုက ကြီးစိုးတုန်း။ အပူချိန်က သုညဒီဂရီအောက်၊ ကားမှတ်တိုင်မှာ စောင့်နေရင်း စိတ်က ဆွမ်းကျွေးပွဲဆီပဲ ရောက်နေတယ်။ ကံမကောင်းချင်တော့ ခါတိုင်း မနက် ၀၆း၁၈ မိနစ်လာတဲ့ ဘတ်စ်ကားက ၇ နာရီကျော်မှ ရောက်လာတယ်။ ဘူတာရုံကိုရောက်တော့ ရထားတွေကလဲ cancel ဖြစ်လိုဖြစ် delay ဖြစ်လိုဖြစ်။ ထုံကျင်အောင် အေးစက်နေတဲ့ ဆောင်းနံနက်ခင်းမှာ အရာရာဟာ နောက်ကျပြီးရင်း နောက်ကျလို့ … ။
(၁) စောင့်နေကျ ကားမှတ်တိုင်အိုလေး ... (၂) အလုပ်ကရခဲ့တဲ့ ခရစ်စမတ်လက်ဆောင် (မှတ်ချက် ခုထိ မသောက်ရသေးပါ) ;)
အဲဒီနေ့ရဲ့ ညနေခင်းကတော့ ကျမအတွက် ကြည်နူးစရာဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျမမောင်လေးနဲ့ မောင်လေးမိန်းမက ဆွမ်းကျွေးပွဲအပြီးမှာ ကျမဆီလာခဲ့ကြတယ်။ အလုပ်ကနေ အိမ်ကို တန်းမပြန်ဘဲ သူတို့ကို ဘူတာမှာ စောင့်ကြိုရင်း ကျမ ပင်ပန်းရမှန်းမသိ၊ ဘူတာရုံက ကော်ဖီဆိုင်လေးမှာ ထိုင်ရင်း စိတ်လှုပ်ရှားစွာ နာရီတကြည့်ကြည့်နဲ့ ၀င်လာမယ့် ရထားကြီးကို တနာရီနီးပါးလောက် စောင့်နေခဲ့တယ်။ ၁၁ နှစ်ကျော်ခွဲခဲ့ရတဲ့ မောင်နှမနှစ်ယောက် ပြန်ဆုံတဲ့ ညနေ … ။
ဦးရီးတော်လိုက်ပို့ပေးလို့ အနီးတ၀ိုက် countryside တွေ လျှောက်လည်ကြတယ်။ အဲဒီနေ့က အရမ်းအေးလို့ လမ်းတွေက ရေခဲပြီး ချောနေတယ်၊ ဘယ်နှစ်ခါသွားသွား မရိုးနိုင်တဲ့ iron bridge က ခါတိုင်းလို လူများမနေဘူး။ ကျမတို့ ရှေ့မှာပဲ လူကြီးတယောက် ချော်လဲပြီး ခေါင်းပေါက်သွားတာ ambulance ခေါ်လိုက်ရတယ်။ သွေးတွေမနည်းဘူးပဲ။ အဲဒါမြင်လို့ ကြောက်ပြီး ကျမတို့တွေ လမ်းမလျှောက်ရဲကြတော့ဘူး။
(၁)သံတံတားပေါ်မှာ ... (၂) တောနှင့်တောင်ခွင် လွမ်းဖွယ်မြင်သည် ...
အဲဒီညမှာ ရထားကြီးစီးလို့ အမေတို့ရှိရာ အမလတ်အိမ်ကို မောင်နှမတွေ တူတူသွားကြတယ်။ ဟိုရောက်တော့ ည ၁၀ နာရီခွဲကျော်ပြီ။ အဖေက ရေနွေးကြမ်းတအိုးကို ကျကျလေးနှပ်ပြီး ကျမတို့အလာကို စောင့်နေတယ်။ မိသားစုတွေ ပြန်ဆုံကြပြီပေါ့။ စကားတွေ ပြောမကုန်တဲ့ ညခင်းကလေး။
ရထား ၃ ဆင့်စီးပြီးမှ ရောက်တဲ့ ၀င်ဆာရဲတိုက်ကို သွားကြည့်ကြတယ်။ ၀င်ကြေးက တယောက်ကို ၁၆ ပေါင်ခွဲ၊ ကျမက ကျောင်းသားမို့ ၁၅ ပေါင်နဲ့ လျှော့ဈေးရတယ်။ အ၀င်မှာ နားကြပ်နဲ့ အသံသွင်းထားတဲ့ စက်ကလေး တခုစီိယူခဲ့ကြတယ်။ နေရာတနေရာရောက်တဲ့အခါ အဲဒီနေရာက နံပါတ်အတိုင်း အသံသွင်းစက်က ခလုတ်လေးတွေကို နှိပ်ရင် သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို ရှင်းပြတယ်။ တခါတုန်းက သွားခဲ့တဲ့ Warwick ရဲတိုက်လောက် မကျယ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိအသုံးပြုနေဆဲမို့ ခမ်းနားမှုက ပိုသာတယ်။ အထဲမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့မရတာတော့ အဆိုးသား။
(၁) ရဲတိုက်ဝင်ပေါက် ... (၂) ဗြိတိသျှအလံ တလူလူလွင့်နေတဲ့ ရဲတိုက်ကြီး
ကြီးကျယ်ခြင်း ခမ်းနားခြင်းတွေအပြည့်နဲ့ ... ရာဇ၀င်တွင်ကျန်မယ့် သူရဲကောင်းတို့ ၀ိညာဉ်တွေ ၀န်းကျင်တခုလုံး လွှမ်းခြုံထားသယောင် ...။ အင်း ... သူရဲကောင်းဆိုတာကလဲ တခြားဘက်ကကြည့်တော့ ဗီလိန်ဖြစ်နေနိုင်တာ ... ။ ကြည့်လေ ... အဲဒီမှာ ...
မန္တလေးက မ-သွားတဲ့ အမြောက်ကြီးနဲ့ ခေါင်းလောင်းကြီး ... စိတ်နာနာနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ဖိရိုက်ခဲ့တယ်။
ယောင်းမလေးက ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ ညဘက် သီရေတာသွားပြီး Peter Pan သွားကြည့်ကြတယ်။ မြို့သေးသေးလေးကမို့ သီရေတာကလဲ သေးသေးလေး၊ ဈေးလဲ သိပ်မကြီးဘူး၊ အပေါ်တန်းကကြည့်ရင် တယောက်ကို ၁၉ ပေါင်၊ အောက်ဖက်ကကြည့်ရင်တော့ ၂၃ ပေါင်တဲ့။ လူတွေကို အပေါ်စီးက ကြည့်ချင်လို့ (တကယ်က ဈေးသက်သာအောင်လို့ပါ) အပေါ်တန်းကပဲ လက်မှတ်ဝယ်လိုက်တယ်။ Pantomime လို့ခေါ်တဲ့ ပျော်စရာ ရယ်စရာ ပြဇာတ်မျိုးလေးမို့ ကလေးတွေပျော်ကြတယ်၊ လူကြီးတွေလဲ ပျော်ကြတာပါပဲ။
ပြဇာတ်ပြနေချိန်မှာ ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယို ရိုက်လို့မရဘူး၊ ဒါကြောင့် မစခင်နဲ့ ခဏနားချိန်မှာ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေပါ။
အလုပ်သွားရမှာမို့ မနက် ၄ နာရီထရတယ်။ ကျမ အလုပ်နဲ့ အမအိမ်ရှိတဲ့မြို့က ၂ နာရီကြာအောင် ရထားစီးရတယ်။ အသွားအပြန်လက်မှတ်ဝယ်ရတာ ပေါင် ၅၀၊ အလုပ်က ၅ နာရီပဲ လုပ်ရမှာ။ တကယ်က ရမှာနဲ့ ကုန်တာနဲ့ မကိုက်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်မဖျက်ချင်လို့ ကိုယ်ပဲ အနစ်နာခံပြီး သွားလိုက်တယ်။ ဘူတာကို အဖေနဲ့ မောင်လေး လိုက်ပို့တယ်။ မနက် ၅း၄၁ ရထားနဲ့။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ညနေ ၄ နာရီခွဲ။ ပျော်နေတာနဲ့ပဲ ပင်ပန်းရမှန်းမသိ။
ပျော်စရာအကောင်းဆုံး ခရစ်စမတ်အကြိုညကလေးပါ။ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ ဖောက်ကြ၊ ကိုယ်ရတဲ့ လက်ဆောင်လေးတွေနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြ၊ တချို့ပစ္စည်းတွေက ရယ်စရာမို့ တ၀ါးဝါး တဟားဟားနဲ့ ရယ်သံတွေ ဝေစည်နေခဲ့တဲ့ ညချမ်းလေးပေါ့။ အင်း ... နက်ဖြန်ဆို .... ။
ဆုံတွေ့ချိန်က တိုတောင်းလွန်းလှတယ်။ ပျော်လို့မှမဆုံးခင် ခွဲခွါခြင်းက အနားရောက်လာပါပြီ။ ၉ နာရီကြာ လေယာဉ်စီးရမယ့် ခရီးအတွက် အမေက စိတ်လှုပ်ရှားပြီး နေမကောင်းသလို ဖြစ်တော့ စိတ်ပူရပြန်တယ်။ လေယာဉ်ကွင်းကို လိုက်ပို့ကြပြီး မျက်ရည်တွေနဲ့ လှမ်းကြည့်နေတဲ့ အမေ့ကို နှုတ်ဆက် အနမ်းလေးပေးခဲ့တယ်။ မကြာခင် ပြန်ဆုံရအုံးမှာပါ အမေ .... ။
အမေနဲ့ အဖေ လိုရာခရီးကို ချောချောမောမော ရောက်သွားကြပြီ။ မောင်လေးနေတဲ့မြို့မှာက ရာသီဥတု ကောင်းပြီး သာယာတာမို့ အမေတို့အတွက် နေရထိုင်ရ ပိုအဆင်ပြေတယ်။ အမေလဲ နေလို့ပိုကောင်းပြီး ပျော်နေပုံရတယ်။ skype ကနေ စကားပြောရင်း ပျော်နေကြတဲ့ မိဘနှစ်ပါးကို ပုံရိုက်ယူလိုက်တယ်။ အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်ကျန်းမာပါစေ ... အမေနဲ့ အဖေ ... ။
ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည်ပတ် လှုပ်ရှားဖို့ ဦးရီးတော်အိမ်ကို ပြန်ရောက်လာပါပြီ။ ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့ နေ့ရက်တွေကို အိပ်မက်လိုပဲ ပြန်တမ်းတ နေမိတယ်။ အမြဲတသသနဲ့ ထင်ကျန်နေမယ့် အိပ်မက်လေးတွေ ... ...။ မိဘနှစ်ပါးနဲ့ အတူ မောင်နှမ အားလုံး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပြန်ဆုံချင်ပါသေးတယ်။ မဝေးတော့တဲ့ အနာဂတ် တခုမှာပေါ့ ... ။
ပြီးရင် ၂၀၁၂ ရဲ့ ဇန်န၀ါရီက တံခါးခေါက်လာတော့မယ်။
တနှစ်ကုန်ဆုံးလိုက် နှစ်သစ်ရောက်လာလိုက်နဲ့ ... အဟောင်းအသစ် ပြောင်းလဲ ဖြစ်စဉ်တွေ လက်ဆင့်ကမ်း သယ်ဆောင်ရင်း သံသရာက လည်ပတ်နေတယ်။ အကောင်းနဲ့ အဆိုး၊ အချစ်နဲ့ အမုန်း၊ အဖြစ်နဲ့ အပျက်၊ မနှစ်သက်တာတွေရှိပေမဲ့ နိယာမတခုလို လက်ခံရင်း နှလုံးသွင်းကောင်းဖို့ ကြိုးစားရပါဦးမယ်။
ကျမဘလော့ကို မတော်တဆဖြစ်စေ တမင်တကာဖြစ်စေ ရောက်လာသူများအားလုံး နေ့ရက်တိုင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းသာယာ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေလို့ ...
၃၀၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၁၁
Posted by မေဓာဝီ at 11:30 AM 22 comments
Labels: ခရီးသွား မှတ်တမ်း, အမှတ်တရ